Tuulada Kabxanleey ee hiiran oo lagu dagaalamay iyo dowladda oo ciidamo degdeg ah u diraysa – Radio Daljir
Oktoobar 18, 2013 3:54 b 0
Beledweyne, October 18, 2013 – Dagaal khasaare dhaliyey ayaa goor dhowayd oo maanta ka ah ka qarxay deegaanka Kabxanleey ee gobolka Hiiraan, halkaas oo uu ka jiro muran ka dhashay is qabqabsi dhanka beeraha ah.
Goobjoogayaal ku sugan tuulada dagaalku ka qarxay ayaa sheegay in dagaalka oo ah mid beeleed uu khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ka dhashay, in kastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin khasaaraha jira.
Xiisada ayaa weli ka aloosan deegaanka iyadoo la maqlayo rasaasta ay is weydaarsanayaan dhinacyada dagaalamaya oo ah beelo wadda degan oo deegaanka ku leh dhul beereed.
Maamulka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay deegaanka u direen ciidamo degdeg ah oo xiisada dagaalka qaboojiya, Sheikh Xuseen Cismaan oo maamulka ka mid ah ayaa xusay in ay talaabo qaadi doonaan.
Kabxanleey oo 25km dhinaca woqooyi ka jirta Beledweyne ayaa ah dhul beereed, ?inta badan waxaa halkaas ku soo noqnoqda murano la xiriira beeraha oo khasaare ka dhasho kadib dagaalada.